WORLD – Daily Som
By Staff on May 9, 2018 WORLD
Madaxweynaha dalka Mareykanka, Donald Trump ayaa shaaciyay in Mareykanku ka baxay heshiiskii Niyuklerka ee dalalka reer galbeedka la galeen Iran. Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu cunaqabetyn hor leh ku soo rogi doona dalka Iran, oo uu ku edeyeeya Iran inay taageerto kooxaha argagixisada ah. Madaxweynaha Maraykanka ayaa heshiiskaasa uu ka baxay waxa uu […]
Dowlada Imaaraatka oo la wareegatay Jasiirada ay isku haystaan Soomaaliya Iyo Yamen
By Staff on May 4, 2018 WORLD
Ciidamo ka tirsan Militaiga Imaaraatka oo ayaa dhaq dhaqaaq Ciidan ka wada Jasiirada Suqadara ee ay ku muransan yihiin Dowlada Soomaaliya iyo yamen, kuwaas oo maanta gaaray magaaladaas. Waxaana sii xoogaysanayay Is baarinta ee Badwaynta Hindiya waxaana ka soo horjeestay shacabkja jasiiradaas oo ka banaanbaxayo ciidamada tirada Badan ee halkaas dhaq dhaqaaqa ka wada. Askarta […]
Jamhuuriyada Dibmuqaariga ah ee Congo oo qaramada Midoobay ku eedeeysay in ay sawir qaldan ka bixisay dalkaas, iyaga oo sheegay in aysan ka qayb gali doonin shirka Deeq bixiyaasha Caalamka ee ka dhacaya Magaalada Geneva, waxa ayna usababeeyeen in dadkeeda laga bixiyay Sawir Xun oo ayna Istaahilin. Shirkaan ay ka baaqsatay CONGO DR ayaa lagu […]